အမျိုးမျိုးသောနှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်မည်ထောက်ပံ့, Collets Chuck ထိခြင်း Taper Holder, Precision နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်မည်, High Quality ၏ GT12 နှိပ် Collet Chuck သတ်မှတ်ပေးသည်သတ်မှတ်ရန်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Collets System ကိုနှိပ်Collets Chuck သတ်မှတ်မည်နှိပ်
Collets Chuck သတ်မှတ်မည်နှိပ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Collets Chuck သတ်မှတ်မည်နှိပ်, Collets Chuck သတ်မှတ်ပေးသည်ထိခြင်း Taper Holder ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Precision နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်မည် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
High Quality MT-GT ကိုနှိပ် Collets သတ်မှတ်ပေးသည်
မြင့်မားသော Precision J4012 အမျိုးအစားလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း Chuck
မြင့်မားသော Precision J4012 အမျိုးအစားလျင်မြန်စွာ-ပြောင်းလဲခြင်း Chuck
High Quality MT3 / 4/5 နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်ပေးသည်
မြင့်မားသောတိကျ BT40 နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်ပေးသည်
Supply နိုင်ခြင်း: 2000set /MONTH
High Quality MT-GT ကိုနှိပ် Collets သတ်မှတ်ပေးသည် အမည်: ဒါဟာချည် clamping များအတွက်အသုံးပြုသည်။ Shanks နှိပ်အဆိုပါတယ်လီစကုပ်အတွင်းကာကွယ်မှုယန္တရားမှတဆင့်ပြန်နှင့်ထွက်5မီလီမီတာကျုံ့နိုင်ပါ။ ကပိနှင့်ရပ်တန့်သောအခါ၎င်းသည်ကိုထိပုတ်ပါကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်: 1. အသုံးပြုမှု ER တင်းကျပ်စေးထွက်ရှိ collets ။ 2. ER...
မြင့်မားသော Precision J4012 အမျိုးအစားလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း Chuck 1.safety အမြန်အပြောင်းအလဲ တူးဖော်နှိပ် 2.protect Chuck နှိပ် 3.quick ပြောင်းလဲမှု collet အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
High Quality MT3 / 4/5 နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်ပေးသည် collet Chuck သရေကျဘား၏ချည်အကြောင်းကြားပေးပါ။ 1, M က aterial: 40CR 2, ထုတ်လုပ်မှုစံ: MT DIN228 3, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ: တရုတ်လုပ် အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
Supply နိုင်ခြင်း: 2000SET/MONTH
မြင့်မားသောတိကျ BT40 နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်ပေးသည် အဆိုပါ axial သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြိတ်ရှုး၏ radial drive ကို groove ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်သင့်လျော်သော BT40 လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းနှိပ် Chuck Adapter ကို: ရှုး milling ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, ကြိတ်ရှုး၏အမျိုးအစားစုံ, မကျြနှာကိုကြိတ်ရှုး,...
တရုတ်နိုင်ငံ Collets Chuck သတ်မှတ်မည်နှိပ် ပေးသွင်း
အမျိုးအစား: Collets Chuck သတ်မှတ်ရန်ထိခြင်း
အမည်: Overload ၏ function
feature: Antirust လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ထိခြင်း
Size: အပြည့်အဝ Size ကိုထိခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
သိုက်အတွက် 4. r ကို ich
မိန့်အခါအသေးစိတ်အရွယ်အစားဖော်ပြပေးပါ။ ဥပမာ: BT40-GT24-7pcs
Collets Chuck သတ်မှတ်ပေးသည်ထိခြင်း Taper Holder
Precision နှိပ် Collets Chuck သတ်မှတ်မည်
GT12 နှိပ် Collet Chuck သတ်မှတ်ပေးသည်
BT-ER Collets Chuck သတ်မှတ်မည်